အလက်ဆစ် ဆန်းချက် အပေါ် ဝေဖန် နေသူတွေကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွိုင်ကိန်း - SPORTS MYANMAR
အလက်ဆစ် ဆန်းချက် အပေါ် ဝေဖန် နေသူတွေကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွိုင်ကိန်း
အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ဆိုတာ အာဆင်နယ် အသင်း မှ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့တဲ့နောက် ပုံစံကောင်း တွေကို ပြသ နိုင်ဖို့ ဆက်တိုက် ရုန်းကန် နေခဲ့ ရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် သူဟာ အသင်း ရဲ့ လစာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ကို ဝေဖန် သူတွေ ပိုမို များပြား ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ခြေစွမ်းကောင်း မပြနိုင် ဖြစ်နေ ခဲ့တဲ့ ဆန်းချက်ဇ် ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နွေ အပြောင်းအရွှေ့ တုန်းက အင်တာ မီလန် အသင်း ဆီကို အငှားချ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါတောင် ယူနိုက်တက် အသင်း ဖက်မှ ဆန်းချက် ရဲ့ လစာ တစိတ်တပိုင်း ကို ပေးချေ နေရဆဲ ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် အီတလီ မြေမှာလည်း အလက်ဆစ် ဟာ ပုံစံကောင်း တွေကို မပြသ နိုင်ခဲ့ သလို ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေနဲ့သာ ရုန်းကန် နေခဲ့ ရတဲ့ အတွက် ဝေဖန်မှု တွေ ခံနေ ရဆဲ ပါပဲ ။ အခုတော့ ယူနိုက်တက် ဂန္ဓဝင် ရွိုင်ကိန်း က ဆန်းချက် ကို ဝေဖန် နေခဲ့ သူတွေ အပေါ် ပြန်လည် တုန့်ပြန် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် လူတွေက ဆန်းချက် ဟာ လစာ ဝင်ငွေ ကောင်းသလောက် အသင်း အပေါ် ဘာမှ အကျိုးပြု နိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ပြောဆို ဝေဖန် နေခဲ့ ကြတဲ့ သူတွေ ကို ‘ သူ လစာ ဘယ်လောက် ရသလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား နဲ့ ဆိုင်လား ? ကျွန်တော် နဲ့ရော ဆိုင်လား ? ‘ ဆိုပြီး ရွိုင်ကိန်း က တုန့်ပြန် ခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
” လူတွေက ကစားသမား တစ်ယောက် ဘယ်လောက် ရနေ သလဲ ဘာလို့ ဝေဖန် ထိုးနှက် ကြသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်ဖြင့် နိုင်မလည်နိုင် ဖြစ်နေရ ပါတယ် ။ လူတွေ သူ့ အကြောင်း ကျွန်တော့် ကို ပြောရင် ပထမဆုံး ပြောကြတာ လစာငွေ ကိစ္စ ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ လစာ ဘယ်လောက် ရသလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား နဲ့ ဘာဆိုင်လဲ ? ကျွန်တော် နဲ့ ဘာဆိုင်လဲ ? ”
” အခြားသူ တွေလည်း လစာ ပိုရတာတွေ ရှိကြတာ ပါပဲ ။ မီဒီယာ အထက် မှာ ဆိုရင် မင်းသား တစ်ယောက် က ဆိုးရွားတဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကား ကို ရိုက်ကူးလိုက် ပေမယ့် ဒေါ်လာ သန်း 20 လောက် ရရှိ သွားတာမျိုး ရှိကြ ပါတယ် ။ အဲ့တာမျိုး အပေါ် တော့ လူတွေ ဝေဖန် ကြတာ ကျွန်တော် မတွေ့ဖူး ၊ မကြားဖူးခဲ့ ပါဘူး ”
” ကစားသမား တစ်ဦး အတွက် တစ်ကယ်တမ်း အခြေခံ ကျတဲ့ အရာက ကလပ် အသင်းက သူ့ကို လစာငွေ ပေးချေခြင်း ပါပဲ ။ အသင်းက ကစားသမား နဲ့ စာချုပ် သဘော တူညီမှု ရယူတယ် ၊ စာချုပ် ဆိုတာက ကစားသမား တွေကို ဂုဏ်ပြုမှု တစ်ခု ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ခက်ခဲတဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တွေကို ပိုင်ဆိုင် နေခဲ့ရ ပါတယ် ”
” သူတင် မဟုတ် ပါဘူး ၊ ကစားသမား အတော် များများ ဟာ ခက်ခဲတဲ့ အခိုက်အတန့် တွေကို ပိုင်ဆိုင် ရသူတွေချည်း ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ ဒီ ကစားသမာ က ဘယ်လောက် ရနေတယ် ဆိုပြီး သူ့အပေါ် ဒေါသ ထွက်နေတတ်တဲ့ လူစားမျိုးတော့ မဟုတ် ပါဘူး ” လို့ ရိုင်ကိန်း က တုန့်ပြန် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဘောလုံး ပွဲစဉ် တွေကို ရပ်နား ထားတဲ့ အခိုက်အတန့် မှာ ကစားသမား အတော် များများ ဟာ အငှား စာချုပ် သက်တမ်း ပြည့်ဖို့ နီးစပ် နေတဲ့ အနေအထား တွေ ပိုင်ဆိုင် နေကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံး ရာသီ ကို ကစား နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသင်းသား တစ်ဦးကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး လိုက်ရ ပါက အသင်း ရဲ့ အင်အားစု ဟာ လျော့ကျ သွားပါ လိမ့်မယ် ။
ဒါ့ကြောင့် အင်တာ မီလန် အသင်း ဟာ စာချုပ် သက်တမ်း ပြည့်တော့မယ့် အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ကို ရာသီကုန် အထိ အသင်း မှာပဲ ဆက်လက် ရှိနေ စေဖို့ ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ဆွေးနွေးပြီး သဘော တူညီမှု ရယူ နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ ဂိုးသမားလေး ဒင်းန် ဟန်ဒါဆင် ကို ရှက်ဖီး မှာပဲ ရာသီကုန်ထိ ကစား စေဖို့ သဘော တူညီမှု ပေးခဲ့ပြီ လို့ သိရ ပါတယ် ။
PL ချန်ပီယံဖြစ်ထားပေမယ့် ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူရာမှာ လီဗာပူးတို့ ယှဉ်နိုင်ဖွယ် မရှိတဲ့ အသင်း ၂ သင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂျွန်ဘန်း
“ ဒီဘရိုင်း က သူ့ခြေဖျားတောင် မမှီတဲ့ ကစားသမားတွေကို လက်ခုပ်တီးပြီး ဂုဏ်ပြုပေးရမှာလား? ဒါဟာ အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးပါလို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဒန်နီ မာဖီ